I-Solar Air Conditioner, i-Solar Powered Air Conditioner, uMenzi we-Solar Split Air Conditioner Manufacturer
Inkcazo:Solar Air Conditioner,I-Air Powered Air Conditioner,I-Solar Split Air Conditioner,Solar Mini Air Conditioner,,
Solar Air Conditioner,I-Air Powered Air Conditioner,I-Solar Split Air Conditioner,Solar Mini Air Conditioner,,
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Solar Air Conditioner
Iintlobo zeMveliso ze- Solar Air Conditioner , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Solar Air Conditioner , I-Air Powered Air Conditioner ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukukhuselwa kokusingqongileyo kunye nokugcina umbane womoya
Ukucima igridi yomoya-moya, inkqubo iqukethe yonke i-air inverter air conditioning, umlawuli we-air conditioning controler, ipaneli yelanga, ukujikeleza ngokubanzi kwibhetri ye-gel njalonjalo. I-panel panel yamarhanti elandelwe i-72 VDC voltage...
I-Solar Portable Air Refrigerator
Amandla welanga ayaqatshelwa njengenye yezona zinto zifanelekileyo, ezikhuselekileyo, eziluhlaza kunye nolungileyo kwimithombo yamandla ebantwini kwixesha elizayo. Inaloo mivuzo yokufikelela okulula, amandla amakhulu, ukungcola ukungcola nokukhusela...
Isimo soMoya soMbane weHybrid
Umbane omtsha womoya wokufudumala ophezulu kunye nokupholisa umoya womoya usebenzise amandla elanga kunye nokuhlaziywa kwe-biomass fuel njengombane ophezulu ngexesha lokuvelisa ukushisa, okuyiyo ndlela yokufudumala okuluhlaza. Kwifriji, umbane...
KwiChina Solar Air Conditioner Abaxhasi
Kwiimeko zokufudumala kwehlabathi, amandla elanga, njengommeli obalaseleyo wamandla amatsha, uyanconywa ngamazwe kuwo wonke umhlaba. Ngaphantsi kwendlela yokugcina amandla e-carbon, amandla elanga ngokukodwa ngokusekelwe kwi-teknoloji yokukhanya nokushisa sele isetyenziswe kumashishini athile kwaye ihlaziya rhoqo isakhiwo samandla. Inkqubo ye-air conditioning yamandla yelanga ithatha ukushisa nokushisa i-friji, kwaye isakhiwo esibanzi seofisi, ihostele, isikolo, isibhedlele, i-swimming pool, i-aquaculture, intsapho, njl.
Ukulungelelaniswa kwexesha lemoya ye-air conditioning kuyinto enhle, kwaye amandla okupholisa kwenkqubo ayenyuka ngokunyuka kwamandla emisebe yelanga, ehambelana nomfuno ophuthumayo wabantu be-air conditioner ehlobo.
I-friji yokufakela i-friji ye-USES ye-freon njengento ephakathi, enomonakalo omkhulu emoyeni, ngelixa i-friji isebenzisa i-non-toxic and non-waterless or bluetooth lithium bromide njengento ephakathi, enenzuzo kakhulu kwimeko.
Inkqubo ye- air conditioner ye-air inokudibanisa ukupholisa kwehlobo, ukufudumala kwasebusika kunye nezinye iinyanga zokubonelela ngamanzi ashushu, okuphucula kakhulu ukusetyenziswa kunye noqoqosho lwe-system energy energy.
Inkqubo ye-air conditioner system ingabangela ukuba kubekho inzuzo ebanzi yokupholisa ehlobo, ukufudumala ebusika nokubonelela ngamanzi ashushu rhoqo unyaka wonke, kwaye kuza kufumana inzuzo ebonakalayo yezoqoqosho, ezentlalo kunye nezendalo, kunye nethuba elibanzi lokupasa abantu kunye nesicelo.
I-Air Powered Air Conditioner
I-Solar Split Air Conditioner
I-Solar DC Inverter Air Conditioner